Gobolka Molise ee Koonfurta Talyaaniga oo ugu deeqaya 25 kun euro qofkii degga tuulo ka mid… – Hagaag.com
Gobolka Molise ee Koonfurta Talyaaniga oo ugu deeqaya 25 kun euro qofkii degga tuulo ka mid…
Gobolka Molise ee koonfurta Talyaani ayaa soo bandhigay in la siin doono 25,000 kun oo euro ( ku dhowaad 27.500 dollar) qofkii degga tuulo ka tirsan gobolkaasi muddo seddax sano ah, si ay uga soo kabato dhibaatada dad yaraanta.
Madaxa Gobolka Donato Toma ayaa u sheegay wargeyska The Guardian Arbacadii: “Haddii aan bixinno lacag, waxay noqon kartaa dhiirogelin in ay soo deggaan dad kale oo cusub,” wuxuu shardi uga dhigay oo keliya in qofku uu deggo tuulo dadkeedu gaarayaan ilaa labo kun oo qof iyo inuu furto mashruuc cusub asaga oo bil walba la siin doono 700 euro, ayuu yiri Donato Toma.
Wuxuu yiri “Waxaan rabnaa inaan nooleeyno nolosha halkaasi waxaanuna rabnaa inay dadku maal gashadaan, waxay furan karaan mashruuc kasta, ha ahaadeen meel rootiga lagu dubo, makhaayad ama waxkasta, taasi ayaa ah habka lagu nooleyn karo nolosha tuulooyinkeena isla markaana waxay kor u qaadeysa dadka ku noolaanaya.”
Wuxuu tilmaamay in tuulo kasta oo ka tirsan gobolka oo ay ku nool yihiin wax kayar laba kun oo qof ay heli doonaan toban kun oo euro bil walba oo gobolku ugu qoondeeyo si loo dhiso mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana kor loogu qaadayo howlaha dhaqanka.
Sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee Tirakoobka Talyaaniga, gobolka Molise, oo ay ku nool yihiin 305,000, ayaa ka mid ah gobollada ay ka baxeen tiro badan oo dad ah sannadihii ugu dambeeyay in ka badan 9,000 oo qof tan iyo 2014.
Sanadkii 2018, gobolka waxaa uu waayey 2,800 oo qof geeri ama iyagoo deggay meelo kale, iyadoo aan wax dhalasho ah laga diiwaangelin sagaal magaalo, sida uu sheegay machadku.
Markii ugu horreysay muddo 90 sano ah, tirada muwaadiniinta Talyaaniga ee ku nool Talyaaniga ay hoos u dhacday, hadda waxaa lagu qiyaasay 55 milyan oo qof, sida laga soo xigtay machadka. Khubaradu waxay ku sheegeen sababta hoos u dhaca in tirada dhalashada ay yaraatay iyo dadka dhalinyarada ah oo u guuray wadamada kale ee Yurub iyagoo raadinaya fursado shaqo oo ka wanaagsan tan dalkooda.